Global Voices teny Malagasy » Maniry ny hidiran’ny firenena ao amin’ny OTAN sy Vondrona Eoropeana ve ny Makedoniana? Ny fitsapa-kevi-bahoaka manan-tantara ho hilaza · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 19 Oktobra 2018 6:06 GMT 1	 · Mpanoratra Marko Angelov Nandika Raveloaritiana Mamisoa
Sokajy: Eoropa Afovoany & Atsinanana, Makedonia, Fifandraisana iraisam-pirenena, Fifidianana, Mediam-bahoaka, Politika
Fihetsiketsehana manohana ny fitsapankevi-bahoaka tamin'ny 16 Septambra 2018 tao Skopje. Sary avy amin'i Andreja Stojkovski via Twitter , nahazoana alalana.
Hifidy amin'ny fitsapa-kevi-bahoaka ny Makedoniana amin'ny 30 Septambra raha tokony hanatevin-daharana ny firaisan'ny Fikambanana Fifanarahan'ny Atlantika Avaratra (OTAN) sy ny vondrona Eoropeana ny fireneny na tsia
Ampahany amin'ny dingana izay efa nanomboka tamin'ny taona 1993 ny fitsapa-kevi-bahoaka, rehefa nanambara ny antoko politika rehetra tao amin'ny Repoblikan'i Makedonia vaovao mizakatena tamin'izany fotoana izany fa laharam-pahamehana fototra ny fidirana ao amin'ny OTAN. Maro no mihevitra fa ny fidirana ao amin'ny fiombonan'ny tafika dia hanampy amin'ny fiarovana an'i Makedonia, any amin'ny faritra mikorontana any Balkana, manoloana ny herisetra ivelany sy ny ady an-trano. Taona maro taty aoriana, niditra tamin'ny fomba mitovy amin'izany mba hanao izay hidirana ao amin'ny Vondrona Eoropeana ny firenena.
Mitaky ny faneken'ny mpikambana rehetra efa misy ny fidirana ao amin'ny OTAN sy ny EU, ka mila mamaha ireo fifanolanana roa lafy miaraka amin'ny mpifanolo-bodirindrina aminy aloha i Makedonia, izay efa mpikambana ao amin'ireo fikambanana roa ireo ny sasany amin'izany mpifanolo-bodirindrina izany.
Ny vato misakana lehibe indrindra dia ny disadisa hatry ny ela miaraka amin'i Gresy , izay nanakana ny fampandrosoana an'i Makedonia nandritra ny 27 taona. Tamin'ny volana jona 2018, amin'ny maha-fepetra voalohany hanesorana ny veto Grika amin'ny fidirana ao amin'ny Vondrona Eorôpeana sy OTAN, nanasonia fifanarahana  izay manery ny firenena hanova ny anarany ho Repoblikan'i Makedonia Avaratra i Makedonia.
Na eo aza izany fifanarahana izany, mbola olana lehibe hatrany ny fanovana anarana. Manontany mazava ny fitsapa-kevi-bahoaka amin'ny 30 Septambra hoe :
Mankasitraka ny fidirana ao amin'ny EU sy ny OTAN ve ianao amin'ny fanekena ny Fifanarahana eo amin'ny Repoblika Makedonia sy ny Repoblikan'i Gresy?’
Tsy maintsy mandray anjara ny maro an'isa
Tsy manery ara-dalàna ny fitsapa-kevi-bahoaka fa kosa fakàn-kevitra , ary tsy ho manan-kery raha tsy mandray anjara ny maro an'isa amin'ireo mpifidy voasoratra anarana. Saingy tsy manakana ny dingana fidirana ao amin'ny OTAN sy ny EU ny tsy fahafahana manatratra ny 50 isan-jaton'ny mpifidy, fa mitaky asa goavana fanampiny avy amin'ny parlemanta.
Araka ny filazan'ny mpisera Twitter iray:
Manome fahafahana hiala amin'ny zava-misy izay efa nanelingelina antsika ny 30 septambra, mba hanafahana antsika amin'ny olana hafahafa izay nitazona antsika nandritra ny efa ho 30 taona. Izany no antony #Hifidianako.
Ho an'ireo mpifidy hafa, fanoharana sy fanadiovana fotsiny ny fitsapa-kevi-bahoaka, mampiseho fiverenana “mankany amin'ny lalana mahitsy ” taorian'ny “folo taona nahaverezana ” tamin'ny fitotongana demokratika, ary maro no tsy nahandry:
Nanjary nitebiteby ny firenena iray manontolo, tavela [amin'ny] ‘aorian'ny 30 Sept’ ny zava-drehetra. Na dia te-hividy sandwich aza ianao, dia mety hiteny ilay vehivavy mpivarotra hoe: ‘Tsy izao, fa aleo aorian'ny 30 Sept, rehefa mazava ny toe-draharaha.
Antso hanao ankivy
Mety misy ifandraisany amin'ny fanentanana hanao ankivy (tsy handray anjara) nokarakarain'ny mpanohitra elatra havanana sy tarihin'ireo antoko maromaro tsy parlemantera izany tebiteby izany, anisan'izany ny mpomba ny Rosiana, ny tsy mazoto hiditra ao anatin'ny Vondrona Eoropeana sy ny manohitra ny OTAN United Macedonia (Makedonia Mitambatra) , izay maka tahaka ny Rosia Mitambatra an'i Putin .
Miteraka tahotra eo amin'ireo foko Makedoniana ny fampielezan-kevitra amin'ny fanolorana ny fanovana ny anaran'ny firenena ho dingana voalohany amin'ny hantsana malama mankany amin'ny fandripahana olona ​​na foko. Feno fandisoam-baovao sy fanehoan-kevitra feno fankahalana ny fanentanana, tahaka ny finiavana handisoana dika amin'ny voka-dratsin'ny fifanarahana amin'i Gresy, izay milaza fa nanome zom-pirenena ho an'ny Albaney avy any Kosovo ny governemanta mba hanamafisana ny isan'ny vato “eny”. Nisy aza soso-kevitra momba ny hosoka fifidianana, izay novalian'ny mpisera Twitter iray hoe:
Rehefa mieritreritra tokoa ianao fa manomana fangalaram-bato ny manampahefana, dia mivoaka ny olom-pirenena mba hanasarotana izany, tsy mipetraka ao an-trano ry zareo.
Mandritra izany fotoana izany, tsy nipoitra sady tsy nanohana mivantana ny fanentanana hanao ankivy na nandrisika ireo mpanohana azy handray anjara amin'ny fitsapa-kevi-bahoaka sy tsy hifidy ny fifanarahana amin'i Gresy, izay heveriny fa “filavoana lefona” ny antoko mpanohitra lehibe VMRO-DPMNE, mpikambana ao amin'ny Antokom-bahoaka Eoropeana (EPP) mpandala ny nentin-drazana.
Mpikambana hafa ao amin'ny EPP  niampanga ny VMRO-DPMNE ho mihatsaravelatsihy, satria nandray anjara manokana tamin'ny fanaovana ankivy ireo manampahefana ambony ao amin'ny antoko, ary nampiroboroboin'ny ny fampahalalam-baovao malaza fatratra fa mpitondra tenin'ny antoko ny fanentanana.
Nanambara ihany koa ireo solontenan'ny fitondrana SDSM fa niezaka nanao fifanarahana ny VMRO-DPMNE, nampanantena hanohana ny fitsapa-kevi-bahoaka raha omena famotsoran-keloka ny mpitarika ny antokony teo aloha voaheloka noho ny kolikoly . Nandà ny governemanta, ary noraisina tanteraka toy ny mariky ny fahalemena ny tsy fihetsehan'ny VMRO-DPMNE:
Tsy manana fanapahan-kevitra ofisialy amin'ny iray amin'ireo olana lehibe indrindra ho an'i Makedonia ny VMRO-DPMNE, ary nanambara fa tokony hifidy araka izay tiany ny olona. Amin'ny fifidianana manaraka, manantena aho fa handray fanapahan-kevitra tahaka izany izy ireo ary tsy hilaza izay hoe iza no hofidiana.
Paikady amin'ny media sosialy sy siosio momba an'i Rosia
Ao amin'ny haino aman-jery sosialy, nanomboka tamin'ny fahavaratra ny fanentanana “manao ankivy aho” (#бојкотирам ), ary tafiditra ao anatin'izany indrindra ireo media sosialy tsy fantatra anarana sy ireo saribakoly maromaro avy amin'ny tafika mpandoto rindrin'ny VMRO-DPMNE. Nahatsikaritra ireo mpanara-baovao fa nitombo ny isan'ireo mpikambana (profil) vaovao tamin'ny volana Aogositra 2018, ahiahina ho roboto mandeha ho azy avy any ivelan'ny firenena. Nozaraina tamin'ny alalan'ny horirantava mifandray amin'ireo olona manokana ihany koa ny fanentanana, anisan'izany ireo mpandresy lahatra an-dalantsaran'ny VMRO-DPMNE, ireo fikambanana nasionalista Makedoniana miasa any ampielezana, ary ny filohan'i Makedonia , izay nahazo ny toerany tamin'ny fanohanan'ny antoko.
Olona 50 teo no nanatrika ny fampielezan-kevitra hanao ankivy tao Ohrid tamin'ny 22 Septambra. Saripikan'i GV, CC-BY.
Nolazain'ny loharanom-baovao tandrefana fa niezaka nisakantsakana  ny fanamafisana ny fidirana ao amin'ny OTAN sy ny EU i Rosia; raha nanontaniana izy, dia nilaza tamin'ny fomba diplaomatika  ny praiminisitra Zoran Zaev fa tsy nahita “porofon'ny fitsabahan'ny Rosiana mivantana tamin'ny vaovao diso” momba ny fitsapa-kevi-bahoaka ny manampahefana, ary matoky ireo mpiara-dia amin'i Makedonia ao amin'ny OTAN amin'ity raharaha ity izy.
Talohan'izany fanambarana izany anefa, somary tsy nimpirimpirina i Zaev nilaza ny fikasan'i Kremlin – anisan'izany ny famatsiam-bola hanaovana fihetsiketsehana feno herisetra ataon'ny olom-bitsy Grika-Rosiana mpanankarena – mba hanakanana ny fifanarahana amin'i Gresy. Ankoatra izay, nisy mpanao gazety tsy miankina iray nahita fa tamin'ny taona 2015, nitsidika an'i Makedonia noho ny fandraharahana i Anana Bogacheva, manam-pahaizana momba ny fambolena.  Nantsoina ho iray tamin'ireo teratany Rosiana 13 voampanga ho nitsabaka tamin'ny fifidianana Amerikana 2016 izy nanomboka tamin'izany.
Nampiasa ny tetikady nampiasain'ny Amerikana havanana ihany koa ny fampielezan-kevitra “Tsy handray anjara aho”, anisan'izany ny fampiasana ny sary-sy-soratra Pepe the Frog  [Pepe ilay Sahona], ka na ny mpikambana ao amin'ny VMRO-DPMNE aza nitsikera izany satria tsy azon'izy ireo hoe ahoana no nanovana ny famantarana ny antokony, ilay liona matanjaka, ho sahona .
Vonona amin'ny fiovana
Nisy ireo fikasana, indrindra tamin'ny alalan'ny fanafihana antserasera mba handrahonana ireo mpikatroka sy olo-malaza elatra havanana ao amin'ny mpanohitra izay nilaza fa handray anjara amin'ny fitsapa-kevi-bahoaka izy ireo. Nahatonga azy niharan'ny fanorisorenana ratsy tao amin'ny Facebook ny fanambaràn'ny minisitry ny governemanta VMRO-DPMNE teo aloha , Nikola Todorov, fa hifidy ny “tsia” izy. Na dia eo aza ny olana sasany momba ireo fandrahonana, tsy manantena herisetra be ny mpanara-maso.
Marobe ihany koa ireo olom-pirenena naneho ny fanohanan'izy ireo ny fitsapa-kevi-bahoaka ho toy ny fitaovana faratampony amin'ny demokrasia, sy ho an'ny fampielezan-kevitra tohanan'ny governemanta mba hifidy izany:
Efa ho telopolo taona isika no niaina tao anaty lava-bato, no sady maniry ny hahalalan'izao tontolo izao antsika sy hankatoa antsika.
Ankoatra izany, fantatr'izao tontolo izao fa niaina tao anaty lava-bato isika.
Raha misy zavatra tokony atao ny fanadihadiana natao nandritra ny volana maromaro mialoha ny fitsapa-kevi-bahoaka, dia vonona ho amin'ny fiovana ny ankamaroan'ny olom-pirenena Makedoniana, na dia midika izany aza fa mitelina ny pilina mangidy ho amin'ny fanovana anarana ho takalon'ny tombontsoa maharitra amin'ny fidirana ao amin'ny OTAN sy Vondrona Eoropeana.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2018/10/19/127113/
 disadisa hatry ny ela miaraka amin'i Gresy: https://globalvoices.org/2018/05/25/macedonians-manage-to-joke-about-a-serious-naming-dispute-with-greece/
 fitsapa-kevi-bahoaka amin'ny 30 Septambra hoe: http://www.sec.mk/en/
 mankany amin'ny lalana mahitsy: https://sitel.com.mk/zaev-gragjanite-kje-bidat-uvereni-deka-sme-na-vistinskiot-pat
 folo taona nahaverezana: http://www.libertas.mk/izgubena-detsenija-izgubena-generatsija/
 antoko : https://www.glaszamakedonija.mk/
 United Macedonia (Makedonia Mitambatra): http://edinstvenamakedonija.mk/
 milaza : http://crithink.mk/zloupotrebena-fotografi-a/
 filavoana lefona” : http://meta.mk/en/mickoski-zaev-s-deal-is-capitulation-vmro-dpmne-will-not-support-it/
 Antokom-bahoaka Eoropeana (EPP) : https://en.wikipedia.org/wiki/European_People%27s_Party
 Mpikambana hafa ao amin'ny EPP: https://www.dw.com/mk/%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B8-%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8-%D0%B7%D0%B0-%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B5%D1%82%D0%BE-%D0%BD%D0%B0-%D0%B2%D0%BC%D1%80%D0%BE-%D0%B4%D0%BF%D0%BC%D0%BD%D0%B5/a-45653648
 voaheloka noho ny kolikoly: http://www.balkaninsight.com/en/article/macedonia-s-ex-pm-races-against-time-for-jail-08-30-2018
 filohan'i Makedonia: http://meta.mk/en/the-many-shenanigans-of-gjorge-ivanov/
 niezaka nisakantsakana: https://www.telegraph.co.uk/news/2018/09/27/russia-orchestrating-covert-campaign-wreck-macedonia-name-change/
 nilaza tamin'ny fomba diplaomatika: http://meta.mk/en/zaev-i-have-no-evidence-of-russian-influence-in-macedonia/
 amin'ity raharaha ity : https://www.project-syndicate.org/commentary/russia-interference-greece-macedonia-by-christopher-r-hill-2018-08
 famatsiam-bola hanaovana fihetsiketsehana feno herisetra : http://meta.mk/en/zaev-for-buzzfeed-news-pro-russian-businessmen-pay-for-violent-protests-in-macedonia/
 nitsidika an'i Makedonia noho ny fandraharahana i Anana Bogacheva, manam-pahaizana momba ny fambolena.: http://meta.mk/en/russian-cyber-spy-rummaged-through-macedonia-following-events-in-kumanovo/
 Pepe the Frog: https://en.wikipedia.org/wiki/Pepe_the_Frog
 ho sahona: https://medium.com/dfrlab/electionwatch-boycott-campaign-in-macedonia-features-familiar-characters-ef0f1aab52b6
 fanambaràn'ny minisitry ny governemanta VMRO-DPMNE teo aloha: https://novatv.mk/nikola-todorov-vmro-dpmne-ne-smee-da-go-bojkotira-referendumot/